Blog Taura Radio WordPress Sidebar
Mugovera, January 22, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tave neredhiyo yedu ichienda kwemwedzi yakati wandei uye tichiramba tichivaka huru inotevera yekutenda Blog Taura Radio. Nguva pfupi yapfuura, shamwari Erik Deckers uye Kyle Lacy vaive kuzokurukura yavo yazvino bhuku Kuzvitengesa Wako: Mashandisiro Ekushandisa Yemagariro Midhiya Kuzvipinza kana Kuzvigadzirira Iwe.
Isu takagutsikana kwazvo neBlog Talk Radio. Iri ibasa rakakura riri nyore kushandisa uye haridi chero hunyanzvi hwekuteerera kuti utange. Tine Yeti podcasting maikorofoni, asi sevhisi zvakare inokutendera kuti iwe udye mukati. Svondo rino tanga tinezvakanangana neInternet yedu saka tangoshandisa speakerphone yangu parunhare mbozha kuita show.
Ini ndanga ndatochinja sidebar kuratidza maredhiyo azvino, asi ini ndaida kunyatsobatanidza iyo odhiyo mutambi kuitira kuti vashanyi vakwanise kutamba episode yakananga kubva padivi rerutivi. Mukati me fetch_feed loop iyo inoverenga iyo feed uye ichiratidza, iwe unongofanirwa kuwedzera kodhi snippet yekubatanidza iyo mp3 faira kubva kuBlog Talk Radio.
Izvi zvichawedzera iyo chaiyo nzira kune mp3 player yakananga mukati memakona mabhureki ayo anopfuura iyo kusiana kune yekuisa_audio_player basa:
[odhiyo: get_permalink (); mp3> upamhi = 100%]
Izvi zvinoita kunongedzera odhiyo odhiyo kune ruzha faira iro rakaitirwa paBlog Talk Radio. Hazvina kunyanya kushata netambo imwe yekodhi!
Mar 28, 2011 pa 11: 40 PM
Ehe, maikorofoni yeYeti yakapfuura zvinotarisirwa. Chero nyaya dzemhando
tanga tiri mukushandura maitiro paBlogTalkRadio - uye tinogona
simudza account yedu munguva pfupi kuti uone kana izvo zvichitarisira izvo. Iyo mic
zvirokwazvo haina kugadzirirwa kufamba, asi inotaridzika zvakanyanya kugara
padhesiki. 🙂 Ndiri kufara nekutenga - uye mutengo zvakare.